एकोहोरो शं;ख ब;जा;उँदै महिला हिं’सा र द’ण्डही’नता’वि’;रुद्व काठमाडौंमा प्र;द’र्शन (फोटो/भिडियोसहित) – Nepali Taja Khabar
एकोहोरो शं;ख ब;जा;उँदै महिला हिं’सा र द’ण्डही’नता’वि’;रुद्व काठमाडौंमा प्र;द’र्शन (फोटो/भिडियोसहित)
वृ’ह’त नागरिक आ’न्दो’लनले महिला हिं”सा र द”ण्डही”न”ता अन्त्यको माग गर्दै शुक्रबार काठमाडौंमा प्र”द”र्श”न गरेको छ। वसन्तपुरबाट सुरु भएको प्र”द”र्श”न न्युरोड-रत्नपार्क-भद्रकालीसम्म पु”गे”को थियो। प्रदर्शनमा स”रकारवि”रु”द्ध ए”को”हो”रो शं”ख ब”जा”उनुका साथै सहभागीले ‘ब”ला”त्का”रीलाई फाँ”सी दे’ ‘ह”त्या”रा”लाई का”रबा”ही गर्’ ल”गा”यतका ना”रा ल”गाएका थिए।
मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएको म”हिला हिं”सा एवं प्रतिगमनको वि”रु”द्धमा काठमाडौंमा म”हिला मा”र्च गरिएको छ । वि”रोध र्‍या”लीमा सरकारले महिला हिं”सा रो”क्न नस”केको, ब”ला”त्का”र र ह”त्या”का घ”ट”नाहरू नरोकिएको भन्दै आ”क्रो”श पोखिएको छ । ‘प्रतिगमनवि”रु”द्ध बृ”ह”त् ना”गरिक आ”न्दो”लन’ ना”मको ब्यानरमा प्रदर्शनमा उ”त्रि”एका उनीहरूले म”हिला हिं”सा ब”न्द गर्न, बला”त्का”रीलाई स”जाय दिन, ह”त्यारा पहिचान गरी का:र:बाही गर्न मा:ग गरेका छन् ।
वि:रो:ध प्र:दर्श:नका क्रममा हरेक दिन प्रतिगमन भएको भन्दै हिं”सा र प्रतिगमन रो”क्न मा”ग गरेका छन् । कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवं पू”र्वमन्त्री हिसिला यमी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी लगायत सहभागी थिए ।
मा”र्चमा सहभागीहरूले प्रतिकात्मक रूपमा श”वया”त्रा गरेका छन् । जसमा ए:को:होरो शंख ब”जा:उँदै प्रतिगमनको वि:रोध गरिएको थियो । टा:उकोमा से:तो कपडा बे:रेर से:तो धोती लगाएका केही युवाहरूले प्रतिकात्मक श”वलाई बो”केर शवयात्रा गरेका थिए ।
आ:न्दोलनकारीले ब:ला:त्का:रपछि ह:त्या ग:रि:एका कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त, बैतडीकी भागरथी भट्ट लगायतलाई न्या:यको मा:ग गरेका छन् । उनीहरूले दिनहुँ महिला एवं बा:लि”काहरू अ:सु:रक्षि;त रहँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई न्या”;य दिन नसकेको भन्दै उनीहरूले आ;क्रो;श पो;खेका छन् ।यो समाचार प्रकासित छ
यो पनि पढ्नुहोस;एजेन्सी। आमा के हुन्? एक महिला आफ्नो बच्चाकालागि कसरी आफ्नो जिन्दगीसँग सम्झौता गर्छिन्? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ यो समाचारमा पाइनेछ। आज हामी तपाइँलाई अमेरिकाको लस एन्जलसकी मेलानिया डार्नेलका बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं।
जसका कारण दिनभर उनी थकित हुन्थिन्। मेलानियाका तीन सन्तान छन्। जसमध्ये एक जना मात्र दश महिनाका छन्। उनको नाम माइलो हो। मेलानियालाई धेरै दुख पनि माइलोले नै गर्छन्।
माइला बाहेक मेलानियाको दुई वर्षकी छोरी पनि छन्। जसले कयौं पटक राति आमालाई दुख दिन्छिन्।
पूर्वयुवराज पारस शाह र रवि लामिछानेबीच पोखरामा र’ह’स्य’म’य भेटवार्ता
संसारको अनौ;ठो गाउँ – जहाँ केवल ब;ला;त्कारी मात्र ब;स्छन्
इलामको गुफामा २ दिन देखी अड्किएका युवाको प्रहरी र स्थानियले यसरी गरे उद्धार (भिडियो हेर्नुस्)